Mpamatsy Rotary sy ozinina - Mpanamboatra Rotary China
Ity milina ity dia manana asa maro toa ny mody fanamainana tsy mifandray amin'ny elektronika, fanaraha-maso mari-pana tsy miovaova azo antoka, fampiroboroboana pneumatika, familiana mandeha ho azy, tsipika tsy azo ovaina, fanitsiana ny sisiny mandeha ho azy sns.
Ity milina fanodinana hafanana rotary lanyard ity dia manokana ho an'ny fanontana fanontam-pirinty hafanana / lanyard, famolavolana hafanana tsy manam-paharoa hitadiavana ny kofehy, ny fantsom-pamokarana solika dia mety miorina ary manome hatrany ny hafanana amin'ny kofehy, alao antoka fa loko feno eo amboniny.
Ity milina kalandrie ity dia mety amin'ny fanontana pirinty hafanana amin'ny akora vita amin'ny horonan-taratasy sy ny lambam-pandriana ary koa ny famindrana sora-baventy, saina, T-shirt, lamba tsy misy tenona, lamba, lamba famaohana, lamba firakotra, pad mouse, fehikibo, sns.
Ankoatr'izay, dia mandaitra indrindra amin'ny famindrana lamba tsy tapaka, izay afaka mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa amin'ny vokatra kely. Ary koa ny fanontana fanandramana ho an'ny santionan'ny orinasa lehibe.
Ity milina kalandrie ity dia mety amin'ny fanontana pirinty hafanana amin'ny akora roa sy ny takelaka ary koa ny famindrana sora-baventy, saina, T-shirt, lamba tsy misy tenona, lamba, lamba famaohana, lamba firakotra, pad mouse, fehikibo, sns.
Ankoatr'izay, dia mandaitra indrindra amin'ny famindrana lamba tsy tapaka, izay mahazaka ny takian'ny mpanjifa amin'ny vokatra kely. Ny fanandramana fanandramana ho an'ny santionan'ny orinasa lehibe koa.
Ny milina fanontana hafanana amin'ny kalandrie automatique dia mety amin'ny famindrana lamina amin'ny lamba avy amin'ny taratasy famindrana sublimation. Ampiasaina betsaka hamokarana T-shirt, lamba fandokoana, sainam-pirenena, sora-baventy sns ny karazan-damba rehetra izay mila loko.
Ny milina fanontana hafanana avoakan'ny hafanana dia azo ampiasaina ho an'ny fitaovana horonan-taratasy sy ny famindrana hafanana fitaovana. Izy io dia mety amin'ny famindrana sublimation sora-baventy, saina, T-shirt, lamba tsy tenona, lamba lamba, lamba famaohana, lamba firakotra, pad mouse ary vokatra hafa ao amin'ilay sombin-javatra, indrindra ny famindrana lamba tsy tapaka. Mahavita hafainganam-pandeha fanontana, hamaly ny filan'ny fanontana amin'ny haben'ny mpanjifa.
Manan-tsaina Control Jersey Calandra Roll Heat Press Machine
3.2m calandra fa mety amin'ny T-shirt famindrana sublimation, sora-baventy lehibe, saina, lamba tsy tenona, lamba fitafiana, lamba firakotra, lamba famaohana, paiso totozy, scarves ary vokatra hafa ao amin'ilay sombin-javatra, indrindra fa ny lamba lamba mihodina mila fanontana mitohy.